Zimbabwe broadcaster warns against media bribes
HARARE, Zimbabwe - Zimbabwe's state broadcaster says it has warned low-paid journalists to stop taking bribes from politicians or selling information to online news sites.
Zimbabwe illegal occupiers destroy animal reserve
HARARE, Zimbabwe - Illegal occupiers on an animal reserve in southern Zimbabwe have killed hundreds of animals and torn down several miles (kilometers) of protective fencing, a conservation group said Friday.
Zimbabwe drops charges against US health workers
HARARE, Zimbabwe - An attorney for four American volunteer health workers says Zimbabwe has dropped charges against them alleging they worked at an HIV/AIDS clinic and orphanage without proper medical licenses.
HARARE, Zimbabwe - A Zimbabwean court on Monday freed on bail four Americans arrested and accused of treating AIDS patients without proper medical licenses.
US church wants to resume Zimbabwe AIDS work
JOHANNESBURG - A California church wants to get back to helping AIDS orphans in Africa, once it resolves questions over licensing that led to the arrests of six of its workers in impoverished Zimbabwe, a minister said Sunday.
Zimbabwe arrests 5 Americans over licensing
Zimbabwe arrests 5 US doctors over licensing
Zimbabwe arrests 4 US doctors over licensing
Wounded buffalo kills Zimbabwean conservationist
Zimbabwe diamond-crime whistleblower freed on bail
Zimbabweans wash dirty US dollars with soap, water
Zimbabwe diamond-crimes whistleblower denied bail
Zimbabwe rights activist claims jail mistreatment
Poachers kill 10 elephants in Zimbabwe
Zimbabwe police raid gay group offices, arrest 2
Judge acquits top aide to Zimbabwe prime minister
Zimbabwe female activists arrested, jailed
Zimbabwe searches for a new hangman for executions
White supremacist's killing blamed on hate speech
Zimbabwe police seize human rights photo exhibits
Zimbabwe PM announces re-election bid
Zimbabwean security forces accused of poaching
Zimbabwe prosecution set back in PM aide case
Witness in Zimbabwean trial claims torture